Andao atomboka amin'ny antony anananao tranonkala iray hanombohana azy. Ny tranonkala iray dia ampahany manakiana anao fanatrehana nomerika amin'ny ankapobeny izay amboarina ny lazanao ary afaka manome fampahalalana ilain'ny olona mety ho mpanjifa ianao. Na amin'ny raharaham-barotra inona na inona, ny fisian'izy ireo nomerika dia tsy ny tranonkalany ihany… tafiditra ao anatin'izany:
Ny fandrindrana ny fisianao nomerika amin'ny salantsalany sy fantsona rehetra dia filàna tanteraka ankehitriny ary mihoatra ny fananganana fotsiny izany ao amin'ny tranokala vaovao.
Tsy izany mihitsy ny tranonkalanao vita. Fa maninona Satria mbola miova hatrany ny indostria iasanao. Ny fananana tranokala dia toy ny fanananao sambo izay itetezanao rano mangarahara. Mila manamboatra tsy tapaka ireo fepetra ianao - na mpifaninana, mpividy, algorithman'ny motera fikarohana, teknolojia miseho, na koa ireo vokatra sy serivisinao vaovao. Tsy maintsy manohy manitsy ny fitetezanao ianao mba hahombiazanao amin'ny fisarihana, fampahalalana ary famadihana ireo mpitsidika.
Mila fampitahana hafa? Toy ny manontany olona hoe: “Ohatrinona ny vidin'ny fahasalamana?”Ny fahasalamana dia mitaky fihinanana sakafo ara-pahasalamana, fanatanjahan-tena ary fanamafisana orina rehefa mandeha ny fotoana. Indraindray misy fihemorana miaraka amin'ny ratra. Indraindray dia misy aretina. Saingy ny fahasalamana dia tsy manana teboka farany, mitaky fikojakojana sy fanitsiana tsy tapaka rehefa mihalehibe isika.
Teknolojia vaovao - araka ny andrasana ny haitao vaovao, hampihatra azy ireo ve ianao? Ny mpitsidika tranonkala ankehitriny dia manana fanantenana samihafa, maniry ny hanompo tena. Ohatra iray lehibe ny fandaharam-potoana amin'ny fanendrena.
Ny tranonkalanao dia fitambaran'ny teknolojia, ny endrika, ny fifindra-monina, ny fampidirina ary, mazava ho azy - ny atiny. Ny andro ny tranonkala vaovao Ny velona dia tsy ny teboka iorenan'ny tetik'asa varotra nomerika anao, Andro voalohany amin'ny fananganana fananganana marketing nomerika tsara kokoa. Tokony hiara-miasa amin'ny mpiara-miasa aminao ianao izay manampy anao hamantatra ny drafitra fametrahana amin'ny ankapobeny, manome laharam-pahamehana ny dingana tsirairay ary manampy amin'ny fanatanterahana izany.